Dlala izinkampani - yimalini i-inthanethi esele ephaketheni? | allans.pl
Ukubukwa okungu-2.67K 20 March 2020 Ezokuxhumana ngocingoplay-inthanethi play-internet-isimo yimani
semrad970	 15 Okthoba 2017 0 Amazwana
Ngingahlola kanjani ku-Play for Business ukuthi mangaki ama-MB asele ukusetshenziswa? Ingabe ikhona ikhodi yayo, ngabe udinga ukushaya kwenye indawo? Noma mhlawumbe udinga ukungena ngemvume nge-Intanethi?
Isivakashi uphendule umbuzo 20 March 2020
allans8.16K Kungezwe: Okthoba 15, 2017
Logan27.25K	 Kuthunyelwe ngo-Okthoba 15, 2017	 0 Amazwana
Phendula ku: Dlala izinkampani - yimalini i-inthanethi esele ephaketheni?
Ngidlale izinkampani futhi uma ngifuna ukubheka isimo se-intanethi, ngifaka ikhodi * 107 # futhi ingikhombisa ukuthi mangaki ama-megabytes asele, ngicabanga ukuthi leli sheke limahhala.
cishe magda gessler1.18K	 Kuthunyelwe ngo-Okthoba 30, 2017	 0 Amazwana
Ngibheka ukuthi ngishiye i-inthanethi engakanani ephaketheni, ngibheka ngekhodi * 107 # futhi ibonisa ukuthi kusale i-inthanethi engakanani ephakethe. Ngidlale izinkampani.
i-pianista1.17K	 Kuthunyelwe ngoJulayi 22, 2018	 0 Amazwana
Ungazama futhi ukubheka kuphaneli yokudlala online (play24), lapho uzonikezwa ukuthi ushiye i-inthanethi engakanani ephaketheni. Ekudlaleni izinkampani nokubhalisile okujwayelekile, kufanele futhi kunikezwe ukudlala.
i-pianista uphendule umbuzo 22 Julayi 2018
inyoka ebushelelezi1.75K	 Kuthunyelwe ngoSepthemba 12, 2018	 0 Amazwana
Kukhona nephaneli eku-inthanethi lapho ungabheka ukuthi ingakanani i-inthanethi ekhona. Bonke opharetha manje bahlinzeka ngamapaneli athile, ukudlala izinkampani nakho kuyanikeza ngokuqinisekile.
Ngokwengeziwe, ungasetha umkhawulo wokusetshenziswa kwe-inthanethi kwi-smartphone yakho. Lapho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuthi uzodlula iphakethe futhi uhlole ukuthi ushiye i-inthanethi engakanani. Futhi ungayisetha ngaphandle kwe-opharetha - kokubili kudlala naku-orange, t-mobile, plus njll.
inyoka ebushelelezi uphendule umbuzo 12 September 2018
Panama640	 Kuthunyelwe ngoDisemba 15, 2018	 0 Amazwana
Umngani wami une-salon yokudlala futhi ngisanda kuthatha inkontileka yebhizinisi naye. Ukubona malini iphakethe le-inthanethi osele ukulidlalela izinkampani, hlola ngekhodi * 107 #. Ihlala isebenza futhi ihlala ikhombisa ukuthi kusele kangakanani iphakethe.
Angikaze ngisebenzise lonke iphakethe lami ukudlala izinkampani, kepha ngine-intanethi ekhaya nasehhovisi.
Panama uphendule umbuzo I-15 December 2018
ajno (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngo-Ephreli 13, 2019	 0 Amazwana
Ngibonile ukuthi emdlalweni wezinkampani ezisephakeji, i-intanethi ihamba kancane kakhulu. Angazi kungani. Ngenkathi ngikhuluma kuFacebook messenger ngezwi cishe isigamu sehora, akukaze kwenzeke lutho, noma ama-MB ambalwa, engingazange ngiqaphele nhlobo.
Ngingakweluleka kuphela ukuthi uma ufuna ukuthatha noma yini ukudlala izinkampani, kuzuzisa kakhulu lapha:
Ngaphandle kwesalon, konke kushibhile.
ajno uphendule umbuzo 13 April 2019
Ik (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngoMashi 20, 2020	 0 Amazwana
Kuhlelo lokusebenza lwe-Play24 unakho konke okutholakalayo mayelana nokubhaliselwe kwakho. Kukhona nemininingwane yokuthi une-inthanethi engakanani ephaketheni. Lolu hlelo lokusebenza lumahhala futhi lungalandwa ku-Google Play nakulesi sitolo ngama-iPhones nawo.
Ik uphendule umbuzo 20 March 2020
allans8.16K Kungezwe: Mashi 21, 2020
Bona okufakiwe okufana ne- Dlala izinkampani - yimalini i-inthanethi esele ephaketheni?
I-Samsung - i-SIM khadi ayisebenzi, i-SIM khadi ayitholakalanga
Ngishayela kanjani umuntu othile ku-Google Play engenamali ku-akhawunti, noma ngicele ucingo?
I-PlayStation 4 iyathengiswa / ungayithenga kuphi i-PS4 eshibhile?
Inombolo yocingo - 845370422 - ingekabani?
nju mobile - imibono yakho kunethiwekhi yeselula ye-nju
Uhlamvu R lapho kufinyelelwa khona kudlalwa
Ukuzulazula e-European Union (EU) kusukela ngoJulayi 2017
Linganisa usizo lwentambo ye-Play yezinkampani - yimalini i-inthanethi esele ephaketheni?
(2 amavoti, isilinganiso: 5,00 5 kwezingu-XNUMX
Ingabe intambo Dlala izinkampani - yimalini i-inthanethi esele ephaketheni? ingabe ikuthinta wena, inkampani yakho, ukuzalanisa, umkhiqizo noma elinye ibhizinisi?
<a style="background: #756867 url('https://allans.pl/logo.png') no-repeat left 7px center;color: white;display: inline-block;padding: 8px 12px 8px 45px;background-size: 30px;font-size: 13px;border-radius: 3px;" href="https://allans.pl/p/play-dla-firm-ile-zostalo-internetu-w-pakiecie/" target="_blank">
SONY KD-65XE8577 TV - izibuyekezo
Uyini umthelela weBrexit e-UK?